Azonao atao ny manandramana ny interface interface an'ny Galaxy | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | 09/04/2021 12:00 | Fampiharana iPhone
Ny fanovana ny ecosystem, na Android na iOS na vice versa, dia mety ho trauma ho an'ny mpampiasa sasany, zavatra mahazatra ihany koa amin'ny Android, izay misy ny mpanamboatra tsirairay mampiasa sosona fanamboarana hafa, ka indraindray toa samy hafa tanteraka ny rafitra fiasan'izy ireo.
Raha mpampiasa iPhone ianao ary manana ny Mahaliana ny fomba fiasan'ny Galaxy amin'ny sosona fanaingoana One UI, izao dia azonao atao izany fa tsy mila mankany amin'ny fivarotana na mividy smartphone amin'ny mpanamboatra Koreana noho ny tranonkala iTest vitanao izany raha tsy miala amin'ny sofa ianao.
Tsy mila mandeha any amin'ny magazay ianao na mangataka amin'ny namanao amin'ny telefaonin'izy ireo hanandrana One UI, iray amin'ireo sosona manokana mampiavaka azy manokana izay azontsika jerena amin'ny ekosistema Android.
Rehefa mitsidika ny tranokala iTest.nz avy amin'ny fitaovana iPhone dia hangataka anao hino izy hitsin-dàlana mankany amin'ny tranokala amin'ny iPhone-nao. Ity dingana ity dia mamorona rindrambaiko web. Rehefa novonoina dia haseho ny interface ny Samsung Galaxy. Raha mijery ny pejy amin'ny mpizaha hafa hafa isika, dia hiseho ny kaody QR izay tsy maintsy ataontsika scan amin'ny fakantsary iPhone.
Amin'ny alàlan'ity tranonkala ity dia azontsika atao mifandraisa amin'ny atin'ny mpampiasa, fidio ny safidin'ny fikirakirana (raha tsy afaka mifanerasera amin'izy ireo), mampihatra lohahevitra fanaingoana amin'ny alàlan'ny Galaxy Store.
Rehefa manindry ny fakan-tsary, toro-hevitra avy amin'ny sary Logan Dodds aseho, ankoatry ny fampisehoana ireo safidy rehetra atolotry ny UI iray antsika amin'ny fampiharana fakantsary. Mandritra ny fampiasantsika ny rindranasa an-tranonkala dia hahazo hafatra an-tsoratra simulated samihafa izahay, ahafahantsika manamarina ilay interface fampandrenesana.
Tsy afaka mandà izany isika mahaliana ny hevitra, saingy noho ny fetran'ny sasany, dia mianjera kely kely izy io, saingy ho tsara kokoa noho ny tsy misy foana. Raha te hampandeha ity tranonkala ity dia mila iPhone 7 farafaharatsiny izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Azonao atao ny manandramana ny interface interface an'ny Galaxy
Na dia tsy manana fahalianana kely akory aza aho hahafantatra hoe manao ahoana ny Samsung dia fantatro fa hevitra mety ho an'ireo mpampiasa izay mety liana amin'ny fanovana ny marika na mividy an'io telefaona io. Amin'ity tranga ity, tsara ho an'ny Samsung.